कामुक एलीना – LOVE @ पच्चीस (भाग -२) – अनल गौतम – Mero Film
कामुक एलीना – LOVE @ पच्चीस (भाग -२) – अनल गौतम
२०७५ साउन १९ गते ८:०८
हिजोको थकानले होला बिहान अलि अबेर निद्रा खुल्यो मेरो । म ब्युंझिदा एलीना उसका खैरो केश मेरो छातिभरी फिंजाएर मसंग लपक्क टांसिएर मस्त सुतिरहेकी थिई । सुस्तरी उसलाई पन्छाएर म बाथरुम छिरें । फ्रेस भएर कफी बनाएं । एलीनाको लागी कफी लिएर बेडरुममा पुगी बोलाएं । “गुड मर्निङ एलीना । उठ, मैले कफी ल्याएको छु ।”
उ ब्लाङ्केट तान्दै “नाई बाबा म सुत्छु तिमि अफीस जाउ म भरे उठेर कल गर्छु“ भनि अर्को पट्टी फर्केर सुतिन् । कुनै पनि चिज जती छिट्टै तातीन्छ तेती नै छिट्टै सेलाउंछ रे, सम्बन्ध पनि त त्यस्तै होइन कतै ? हुन त मेरो अनुभव छैन कुनै सम्बन्धमा आज सम्म तर हिजो भेटेर दाई तपाईबाट सुरु भएको सम्बोधन डियर हुंदै, बाबा हजुर बाट अहिले बाबा तीमीमा आईसकेको छ ।
उसको घर व्यवहार कत्ती पनि बुझ्न पाएको छैन मैले । एकै दिनको सम्बन्धमा उ मलाई मेरै घरमा म सुत्छु तिमि काममा जाउ पो भन्दैछे, छक्क पर्दैछु म । न त म उसलाई होइन उठ, हिंड तिमि आफ्नो बाटो अब भन्न सक्छु न त उसलाई मेरो घरमा छोडीराखेर बाहिर निस्कीन नै मन लागेको छ । मनमा कुरा खेल्दै कफी संगै २ वटा चुरोट तानेर म असहज मान्दै निस्कें घरबाट ।
मोटरसाईकल निकाल्न खोज्दै गर्दा घरबेटी दाजै गेटैमा भेटए “बाबु कति बेला आउनु भयो ? फोन पनि गर्नु भएन ।” “नमस्कार दाजै, म राती आईपुगेको, बाटोमा स्कुले छीमेकी साथी भेट भयो अनि साथी संगै आईयो । कती बेला के हुन्छ भनेर खबर नगरेको तर ढोका खुल्लै रहेछ राम्रै भयो ।” म पहिलै सर्तक हुंदै एलीनालाई स्कुले छिमेकी साथी बताईरहेको थिएं ।
“ए, म पनि बाहिर गएको थिएं, फर्कन ढिला हुने थियो त्यै भएर ढोका खुला राखेको ।” दाजै मुस्कुराए । “हस म अफीस जान्छु, साथी माथी नै छ अहिले पछि भेट्छु दाजै ।” भ निकै सभ्य रुपमा यो घरमा बिगत ३ बर्ष देखी बसीरहेको थिएं । घरबेटीहरु मलाई राम्रो व्यवहार गर्थे त्यसैले कुरा लुकाउनु उचित ठानिंन । “हुन्छ बाबु हस” भन्दै दाजै माथी उक्लीए, म अफीस तर्फ लागें ।
“अब कंपनिको तर्फबाट योङ एण्ड डाईनामीक कर्पोरेट हेड श्री सुवास घिमिरेले आगामी बर्षको लागी बिजनेश प्लान प्रस्तुत गर्नु हुंदैछ ।” कंपनिका चेयरम्यानको सम्बोधन पछि पर्रर्रर्रर्र ताली गुञ्जीयो अफीसको ठुलो मिटिङ हलमा ।
“थ्याङ्क्यु सर । रेस्पेक्टेड चेयरम्यान सर एण्ड माई डियर कलिग्स, हिजो निकै राती घर आईपुगेकोले केहि थकित छु र आगामी बर्षको बिजनेश प्लानको फाईनल चेक पनि गर्न सकेको छैन् । केहि त्रुटी भएको रहेछ भने माफ गर्नु होला । कुड यु प्लीज ह्याण्ड ओभर द ल्यापटप टु मि एलीना ?” भन्दै मेरो सहयोगी पट्टी हात बढाएं मैले ।
झण्डै ५०-६० जनाको संख्यामा हलमा बसेकाहरुको हांसोले गुञ्जायमान भयो मिटिङ रुम एकै छिन । “सरी सर, ह्वाट डिड यु से ?” मेरो सहयोगी सविनाले आश्चर्य भावमा म पट्टी फर्केर सोधि । “सुवास इट सिम्स यु ह्याभ नट टेकन रेस्ट प्रपर्लि“ चेयरम्यान मलाई हांस्दै भन्दै हुनुहुन्थ्यो ।
“नो सर आई एम ओके एण्ड आइ एम सो सरी, कुड यु प्लीज सविना ।” मैले माहौल तुरुन्तै सम्हालेर शान्त बनाएं । ओह माई गड, के भयो मलाई यस्तो म ३ बर्ष देखी संगै काम गर्दै आएको सहयोगीलाई पनि एलीना नामले सम्बोधन गर्न थालेछु । होईन एलीना सांच्चै मेरो मनमा गडीएरै बसीसकेकी हो त ? उफ, धन्न मैले राम्रो प्रेजेन्टेशन दिएर आज आफ्नो इज्जत धानें आज ।
“सर, हजुरको भर्खर भर्खर लभ परेको जस्तो छ नि, को हो त्यस्तो भाग्यमानी एलीना ?” सविनाले मिटिङ सकेर कार्यकक्ष फर्कदै गर्दा आंखा झिम्काउंदै सोधिन् । “नट एट अल सविना” उत्तर दिंदा केहि असहज भएको महशुस गरें मैले ।
“नो सर, आई थिङ्क यु आर फल इन लभ विथ एलीना बट यु डण्ट वान्ट टु शेयर विथ मि । आई एम स्योर आई विल फाइण्ड इट आउट भेरी सर्टलि आफ्टर अल वि आर मिडिया पर्सन ।” उ यकिनका साथ भन्दै थिई । “ओके द्यान, अल द भेरी बेष्ट । आई अल्सो वान्ट टु सि योर ट्यालेन्ट ।” भनि म आफ्नो कार्यकक्ष छिरें ।
मलाई अफ्टेरो लागीरहेको थियो । अघिको मिटिङमा भएको कुराले नभै एलीना एक्लै छे मेरो कोठामा भनेर कसो कसो सकस महसुस गरीरहेको थिएं अनि वास्तबमै मेरो थकान पनि राम्ररी मेटीसकीएको थिएन् । उसले बिहान भनेकी थिई म उठेर कल गर्छु तर अहिले सम्म पनि कल गरेकी छैन । अब त उसलाई पो कतै केहि भयो की भन्ने चिन्ता लाग्न थाल्यो ।
“हे सुवास, हाउ यु डुइङ म्यान ? हाउ इज एलीना ? इज सि ब्युटिफुल ?” मेरो सहकर्मि र अनन्य मित्र राजेश मेरो क्याबिनमा आएर मलाई जिस्काउन थाल्यो । “लिभ दिस यार, इट जस्ट केम फ्रम माई माउथ सडनली ।” म झर्केको जसरी जवाफ दिदैं थिएं उसलाई ।
नो म्यान, नो वे । यु आर माई बेस्टी, आई नो यु डिड नट ह्याभ एनी गर्ल इन योर लाईफ । यु माईट गट हर जस्ट फ्यु डेज ब्याक ह्वाईल यु वेर ईन होलिडे । उ एकदमै बिश्वासका साथ केहि सोचेको झैं भन्दै थियो “एलीना, सि मस्ट नट फ्रम योर कास्ट इज सि राई ?”
“ओ माई गड हाउ डु यु नो दिस ?” म छक्क परेर आवेगमा उसको भनाईलाई पुष्टी गर्दै थिएं ।
“माई डियर फ्रेण्ड मेरो अगाडी आएर मेरो टाईको गांठो कसीदिदै राजेशले भन्यो आई एम अ मिडिया पर्सन अल इट्स म्याटर अफ इन्टेलीजेन्स एण्ड एक्सपेरियन्स टु । जस्ट टेल मि हाउ ब्युटिफुल सि इज ।” “गट इट डियर बट इट्स रियली अमेजिङ । सि इज माई क्लासमेट अल्सो नेबर अफ माईन बट वि स इच अदर आफ्टर सेभ्रल इयर्स एस्र्टडे एण्ड वि केम काठमाण्डौं टुगेदर द्याट्स द रियालीटि बट सि इज भेरी व्युटिफुल ।” मैले केहि यथार्थ त केहि बहाना बनाएर उसलाई सम्झाएं ।
“ओके म्यान, अल द बेस्ट एण्ड गुड लक । वि विल सि सुन फर डिनर टुगेदर” भन्दै मेरो गालामा प्याट्ट थप्पड हानेर मुस्कुराउंदै उ आफ्नो बाटो लाग्यो । उ निस्केपछि म केहि ढुक्क हुंदै काम गर्न पट्टि लागें र केही जरुरी कामहरु सकेर म रेष्ट गर्न भनि अलि चांडै निस्कीएं अफीसबाट ।
अफीसबाट तल झर्ने क्रममा बाटोमा फेरी चेयरम्यान संग भेट भयो, “बाई द वे सुवास हु ईज एलीना ?” उहांले मेरो कांध थप्थपाउंदै सोध्नुभयो । एलीना वास्तमा मेरो मनमा मात्रै बसेकी थिइन् अब त उ मेरो अफीसमा समेत चर्चित बनीसकेकी थिई ।
“सर, उ मेरो घर छेउको साथी हो, हामी संगै स्कुल पनि पढेका । लामो समय देखी हाम्रो भेट भएको थिएन तर हिजो हाम्रो अचानक भेट भयो र हामी संगै काठमाण्डौं आयौं । हिजो दिनभरी उसैसंग भएर बोलीरहेकोले होला मेरो मुखमा उसको नाम आएको ।” मैले सामान्य रुपमा एलीनाको बारेमा बताईरहेको थिएं र अब मलाई लागीसकेको थियो मैले एलीनाको परिचय सबैलाई यसैगरी गराउनु पर्नेछ । “ओह, आई थट सि बिकेम योर गर्लफ्रेण्ड एण्ड वाण्टेड टु कंग्रेचुलेट यु । एनी वे, अल द बेष्ट सुवास ।” चेयरमेन सरले कुटील मुस्कानका साथ हात मिलाउनु भयो । थ्याङक्यु सर । म उहांबाट छुटेर तल झरें ।
सफा, टिलिक्क टल्कीएको मेरो घर बाहिरको बरण्डाले मेरो मनलाई दिग्भ्रमीत तुल्याउन खोज्दै थियो । म छक्क पर्दै घर भित्र छिरें, सफा टक्टकीदो मेरो बैठक कोठाले मलाई गिज्याएर स्वागत गर्यो । भुइंको कार्पेट, सोफा, टिभी, दराज, टेबुल लगायतका फर्निचरहरु मात्रै होईन झ्याल ढोकाहरु समेत चम्कीरहेका थिए । “एलीना” बैठक कोठाको सोफामा आफ्नो झोला राख्दै उसलाई बोलाएं । “बाबा म किचनमा छु एतै आउ ।” किचनबाट जवाफ आयो उसको । कति छिटो पो आयौ अफिसबाट, मेरो मायांले बोलायो कि तिम्रो आउने समय नै यहि हो ? उ लाडिदै मस्कीएर मलाई सोध्दै थिई ।
असाध्यै कामुक देखीएर उसको आधा सांप्रा छोपिने कालो रंगको पातलो मेरो फुल सर्ट मात्रै लगाएर सर्टको बटम समेत निकै खोलेर बसेकी एलीना किचनमा चाउमिन बनाउंदै थिई । “ह्वाट इज दिस डियर, मेरो घर त पुरै फेरीएछ अनि मेरो कपडा लगाएर बसेकी छौ । उठेर मलाई कल पनि गरीनौ ।” बिहे हुनु त कता कता प्रेमीका समेत नभएको मेरो जिवनमा एती छिटै आएको यस्तो अकल्पनिय परिवर्तनले कता कता लाज लागेको जस्तो अनुभव भईरहेको थियो मलाइ । “किन, मैले हाम्रो घर हो भनेर सफा गरेको अनि हाम्रै हो भनेर यो कपडा लगाएको । कि मैले गर्नु हुंदैनथ्यो यो सबै ? कि मलाई मायां गर्दैनौ तिमि ?” उ केहि रिसाएको जस्तो गरी बोल्दैथी ।
“होइन डियर, तिमि पनि थाकेकी थियौ अनि किन यो सबै दुख गरेकी भनेर पो त” म अवस्थालाई सामान्य बनाउन खोज्दैथिएं । “मलाई किन त्यस्तो भनेको त तिमिले ? मैले झन उठनासाथ घर फोहोर देखेर सफा गरें अनि बल्ल नुहाएको । तिम्रो मैला कपडाहरु अनि मेरो कपडा पनि धोएं अर्को कपडा ल्याएकी थिइनं त्यसैले तिम्रो कपडा लगाएर खाजा बनाउन लागेको । तिमिलाई कल गरेर किन डिस्टर्ब गर्नु भनेर पो त अनि आफ्नो घरको काम गर्दा मलाई दुख हुन्छ र ?” उ लाडिदै मलाई अंगालोमा बेर्दै म संग टांसिन आईपुगी ।
“ओहो यति छिटो घरजम पो भयो है मेरो त, आइ नो एलीना म त जिस्काउंदै पो थिएं त तिमिलाई । आई लभ यु डियर ।” उसलाई झनै जोडले अंगालोमा कसें तर के के नमिठो गन्ध ह्वास्स नाकमा ठोकीयो मेरो । “लौजा, चाउमिन त डडेछ बाबा” हत्तनपत्त चुलोमा गएर एलिनाले भनिन् ।
“अर्को बनाउनत त मलाई पनि भोक लागेको छ मेरो लागी पनि बनाउ, पहिला चिया बनाउनु है” भन्दै म चुरोट सल्काएर फ्रेस हुन बाथरुम तिर छिरें । कस्तो खालको सम्बन्ध बिस्तार भएको छ हाम्रो यो । हिजो बिहान सम्म अपरिचित हामी आज मेरो कपडा धोएर, मेरो घर सफा गरेर मेरै कपडा लगाएर मेरो भान्छामा खाना बनाउंदैछे । किन उनि यति बिध्न सहज बनेकी छे सांच्चै बुझ्नै सकेको छैन मैले ।
म बाथरुमबाट फ्रेस भइवरी निस्कें उ किचनको डाइनिङमा बसेर चिसा संगै चुरोट तान्दै रहिछे । “एलीना, तिमि बाहिर निस्केकी थियौ र आज ?” मैले उसको अर्को कुर्सि उसको छेउमा सार्दै उसको नजीकै बसेर सोधें ।
“थिइन बाबा, किन ? लिउ चिया पिउ” भन्दै उसले पिइरहेको चियाको मग मेरो छेउमा राखीदिएर मेरो काखमा आएर मलाई अंगालेर बसी । “होइन, तिमिले चुरोट पिएको देखेर कता बाट ल्यायौ भनेर सोधेको नि ।” उसको औंलामा च्यापिएको चुरोटबाट गहीरो श्वास तानें उसैको हात समाएर ।
“मलाई चुरोटको तल तल लागीरहेको थियो काम गर्दा गर्दा नै तर लुगा फोहोर भएकोले कसरी बाहिर जानु भनि सोचीरहेको तिम्रो दराज मिलाउंदा चुरोट भेटे पछी त ढुक्क भएं ।” उ मुस्काउंदै मेरो कपाल सुम्सुमाउन थाली । “अब यहिं बस है म संगै सधैंभरी मलाई यसैगरी मायां गरेर” मैले उसको गाला तान्दै भनें । “हामी अब कहां छुटिने वाला हौं र, म त तिमिसंगै बस्छु जिवनभरी तर मेरो धेरै कामहरु छन् त्यसैले म भोली जानु पर्छ केहि दिनको लागी तीमीलाई छोडेर” उ लाडीएर रुन्चे शैलीमा बोल्दैथी ।
हिजै मात्र भेटेको बिबाहित महिला मेरो घरमा बसीरहंदा अन्यौलमा रहेको मेरो मन उ भोली जाने भन्ने कुराले एकातीर केहि शान्त भएको थियो भने अर्को मनले उ गएपछि फेरी मेरो घर जिवनमा छाउने सन्नाटा अनि उदासीपनले बेचैन पनि ।
“किन जानु प¥यो तिमि तिम्रो कामहरु यहीं बसेर गरे हुंदैन र ?” केहि औपचारीक त केहि चाहनाबाट प्रभावित हुंदै बोल्दै थियो मेरो मन ।
“हुन्छ किन नहुनु बाबा तर हामी सधैं सगैं बस्नका यत्तीकै बसेर पनि त भएन सबै व्यवहार भविष्य योजना सबैमा समझदारी भएर मात्रै गर्दा उचित हुन्छ । हामीबीच यत्ती धेरै मायां र विश्वास छदैछ बेला बेलामा हामी भेट्छौं संगै बस्छौं मायां पिरती साट्छौं तर केहि समयका लागी हामी दुबैले जानौं बुझौं एक अर्कालाई अनि मात्रै सधैंकालागी बिचार गरौला नि हुन्न मेरो मायां ?” बढो दार्शनिक कुरा गर्दै थिई एलीना अहिले । मैले अघि सम्म चिनेको एलीना र यो एलीना बिल्कुलै फरक लाग्दैथियो मलाई ।
“तिमिले बिल्कुल ठिक भन्यौ एलीना तर अझै जान्न र मायांको विस्तार गर्न तिमि बेला बखत यहां आईरहनु पर्छ अनि घुमफीर गरीरहनु पर्छ एक अर्काको पुर्ण ख्याल गर्नु पर्छ है ।” मेरो बोली लाडीएको थियो । “लौ अब त तीमी चाहेर पनि मबाट भाग्न सक्दैनौ । कीन नआउनु नि म, यो त मेरो पनि घर हो अब हरेक हप्तामा १-२ पटक आइहाल्छु ति, मलाई तिम्रो न्याश्रो लाग्दैन र ? अनि तिम्रो सबै कुरामा मेरो पनि बरोबरको हिस्सा रहन्छ नि ।” उ हक जताउंदै भन्दैथि ।
“पक्का हो त ? त्यसो भए मेरो पनि तिमि प्रति अधिकार ठाने भयो त मैले ?” व्यङ्ग गर्दै भनें मैले ।
“लौ भनिरहनु पर्छ अब पनि । तिमिलाई मेरो हरेक कुरामा अधिकार छ तर अधिकार छ भन्दैमा धेरै गिदि गर्न चाहिं पाईदैन नि ।” मेरो कपाल तान्दै भनि । “भनेपछि तिम्रो लागी मैले शपिङ गर्नु पर्ने भयो है तर मैले किनेर ल्याएको कपडाहरु तिमीलाई मन पर्दैन होला ।” उसले लगाएको मेरो सर्ट सरेर माथी पुगेकोले खुला भएको उसको नरम र सुकोमल सांप्रा मायांलु शैलीमा सुम्सुमाउंदै सोधें ।
“भो पर्दैन, मलाई मेरो रोजाईकै चाहिन्छ सबै तर मलाई यहां तिमिसंग बस्न किन लुगा चाहियो र” भन्दै सर्टको सबै बटम खोलेर आफ्नो भित्री बस्त्र मात्रले संबेदनशिल अंग थौरे छोपेको बाहेक सारा शरीर उदांगो पारीन् । “ओह माइ गड, एलीना यु आर अ सेक्सीएस्ट गर्ल आइ ह्याभ एभर सिन इन माई लाइफ ।” म बिस्तारै डुब्दै गएं उसको स्त्रीदेह र मायांको श्वर्गानुभुत गराउने संसारमा ।
अर्को भाग अर्को शनिवार …